စျေးကွက်တွင်အကောင်းဆုံး TikTok Bots
စျေးကွက်တွင်အကောင်းဆုံး TikTok bot များနှင့်သင်၏အကောင့်ကိုမည်သို့ကာကွယ်ရမည်နည်း
၃ ရက် အခမဲ့ အစမ်းသုံးပါ။
built-in proxy တစ်ခုဖြင့်အလွန်လုံခြုံသည်
Smart algorithm နှင့်မြန်နှုန်း
လုံခြုံသောဆက်တင်များရှိသော်လည်း proxy မရှိပါ
အစမ်းမရှိ၊ တစ်ပတ်လျှင် ၁၅ ဒေါ်လာ
motorized automation လိုပါပဲ
လုံခြုံသောပလက်ဖောင်းဖြစ်သော်လည်း proxy မရှိပါ
စတိုင် bot ကိုလိုက်နာပါ / မလိုက်နာပါနှင့်
အစမ်းသုံးစရာမလိုသော်လည်း တစ်လလျှင် $15 ဖြင့် တတ်နိုင်သည်။
လိုက်နာခြင်း / မလိုက်နာခြင်း / ကြိုက်ခြင်းအပေါ် မူတည်၍ အလိုအလျောက်အလိုအလျောက်
proxy မရှိပါ, ကျိုးကြောင်းဆီလျော်လုံခြုံသည်
Jaime ကို အခြေခံ၍ အလိုအလျောက်အလိုအလျောက်
မည်သည့် proxy မှမရှိသော်လည်းအလွန်လုံခြုံသော platform တစ်ခုဖြစ်သည်
Follow / Don't follow / Like style bot
TikTok သည် 2016 ခုနှစ် စက်တင်ဘာလတွင် ထွက်ရှိပြီးကတည်းက မကြုံစဖူး တိုးတက်မှုကို မြင်တွေ့ခဲ့ရသည့် နောက်ဆုံးပေါ် လူမှုမီဒီယာပလက်ဖောင်းဖြစ်သည်။.
TikTok ဒါဟာစျေးကွက်သမားတွေအတွက်အိပ်မက်တစ်ခုပါ, session ကြာချိန်များနှင့် ထိတွေ့မှုနှုန်း အားလုံးထဲမှာအမြင့်ဆုံး လူမှုမီဒီယာ.
ထို့ကြောင့်ယခုအခါတိကျသောအလုပ်များကိုအလိုအလျောက်လုပ်ဆောင်နိုင်သော TikTok bot များရှိနေခြင်းသည်အံ့သြစရာမဟုတ်ပေ။, အောက်ပါအတိုင်း, ခြေရာခံလိုက်, comment များနှင့်ပို့စ်များကို like လုပ်ပါ.
ဘယ် bot တွေကရနိုင်သလဲဆိုတာကိုငါတို့သိချင်ခဲ့တယ်, သူတို့ကဘယ်လိုလုပ်ဆောင်လဲ၊ သူတို့ကလွှမ်းမိုးမှုရှိသူတွေနဲ့စျေးကွက်ရှာဖွေသူတွေရဲ့ထည့်သွင်းစဉ်းစားခံရဖို့ထိုက်တန်လား.
အဓိက TikTok bot များ
ယနေ့ရရှိနိုင်သော ရေပန်းအစားဆုံး TikTok Bots7ခုကို ကျွန်ုပ်တို့ သုံးသပ်ထားပါသည်။:
Tik Tok Bot - စျေးကွက်တွင်အကောင်းဆုံး TikTok Bot, အဝေးကြီးနံပါတ် ၁.
TikTool - ကြီးထွားမှုကောင်းသည်, စိတ်ချရသော, smart features တွေနဲ့ – #၂.
TokUpgrade ကို - install လုပ်ပြီးမေ့လိုက်ပါ – နံပါတ် ၃
ဂျက်ဖရီ - ကောင်းမွန်သောခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုများနှင့်အတူကောင်းမွန်သောပလက်ဖောင်း – နံပါတ် ၄.
လက်ငင်း - ကောင်းစွာအလုပ်လုပ်သောရိုးရှင်းသောချဉ်းကပ်မှု – နံပါတ် ၅.
Tok တိုးတက်မှု - အစပြုသူများအတွက်အထူးကောင်းမွန်သော်လည်းအာရုံမစိုက်ပါ – အမှတ်စဉ် ၆.
Vire - အခြား ၀ န်ဆောင်မှုများနှင့်ယှဉ်လျှင်အလိုအလျောက်နှေးကွေးခြင်း – နံပါတ် ၇.
TikTokBot.io အလိုအလျောက်ပါဝင်ပတ်သက်မှုမှတဆင့်သင်၏အကောင့်ကိုမြှင့်တင်ရန်ကူညီပေးပြီး bot ၏ဖွင့်ချိန်ပေါ် မူတည်၍ နောက်လိုက်ထောင်ပေါင်းများစွာကိုဆွဲဆောင်နိုင်သည့်အလားအလာရှိသည်.
ငါတို့ TikTokBot ကိုရက်သတ္တပတ်အနည်းငယ်ကြာအောင်သုံးခဲ့ပြီး features တွေ၊ ရလဒ်တွေရဲ့အရည်အသွေးကိုစွဲမှတ်ခဲ့တယ်။.
စျေးနှုန်း – $$ – $29.90 p/m
လက္ခဏာများ – ၄/၅ – Targeting Options များစွာနှင့် Automation ကိုခြေရာမခံပါနှင့်, အသိဥာဏ်ဆိုင်ရာ algorithm နှင့်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း.
လုံခြုံရေး – ၄.၅/၅ – လုံခြုံသောဆက်သွယ်မှုနှင့်မိုဘိုင်း proxy တို့ပါ ၀ င်သည်.
အကူအညီ – ၄.၅/၅ – သင်၏ခရီးတွင်သင့်ကိုကူညီရန်ပရီမီယံဖောက်သည်ပံ့ပိုးမှု.
မှတ်ချက် – ၄.၅/၅ – ၎င်းသည်အရာအားလုံးတွင်အကောင်းဆုံးဖြစ်ပြီးအထူးသဖြင့်အသုံးပြုရလွယ်ကူမှုနှင့်လုံခြုံရေးကိုအထူးအလေးပေးခြင်းကိုကျွန်ုပ်တို့နှစ်သက်သည်။.
TikTool အပိုဆောင်းလုပ်ဆောင်ချက်အနည်းငယ်ပါသည့်စံအတိုင်းလိုက် / မလိုက်လုပ်ပါ.
ထက်မြက်သောအကြံဥာဏ်ပေးကိရိယာများနှင့် hashtag finder တို့ကယှဉ်ပြိုင်မှုအပေါ်အနည်းငယ်အနားရစေသည်.
အခြေခံရွေးချယ်မှု၏စျေးနှုန်းသည်အလွန်မြင့်မားသည်, ပရီမီယံ ၀ န်ဆောင်မှု, ပိုမြန်ပြီးပိုကောင်းတယ်, ပိုမြင့်တယ်.
စျေးနှုန်း – $$ – $29 p/m
လက္ခဏာများ – ၄.၅/၅ – ထူးခြားသောအင်္ဂါရပ်များ, အဆင့်မြင့် hashtags နှင့်အကြံပြုချက်များအပါအ ၀ င်.
လုံခြုံရေး – ၄/၅ – လုံခြုံသောပလက်ဖောင်းဖြစ်သော်လည်း built-in proxy ရွေးချယ်စရာမရှိပါ.
အကူအညီ – ၃.၅/၅ – သငျသညျစျေးနှုန်းနှစ်ဆမှာပရီမီယံဝန်ဆောင်မှုကိုမရွေးချယ်လျှင်အခြေခံပံ့ပိုးမှု.
မှတ်ချက် – ၄/၅ – အလွန်ကောင်းမွန်သောပလက်ဖောင်းဖြစ်သော်လည်းမည်သည့် proxy မှခွင့်မပြုပါ.
Tokupgrade ကို ချီးကျူးမှုများစွာရရှိခဲ့သည်, ဒါကြောင့်ငါတို့အဲဒါကိုကြိုးစားရတယ်.
သူတို့ကမင်းကိုစတင်ဖို့အစီအစဉ်နှစ်ခုရှိတယ် – ပုံမှန်နှင့်လိုလားသူ.
နှစ် ဦး စလုံးကိစ္စများတွင်, သင်အထူးရည်ညွှန်းထားသောအကောင့်မန်နေဂျာနှင့်အပြည့်အဝထောက်ခံမှုမှသင်အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသည်.
စျေးနှုန်း – $$$ – $60-100 p/m
လက္ခဏာများ – ၃.၅/၅ – အလွန်ကောင်းမွန်သောစစ်ထုတ်မှုဖြစ်သော်လည်းအကောင့်များကိုသာ ဦး တည်သည်.
လုံခြုံရေး – ၃.၅/၅ – လုံခြုံသောပလက်ဖောင်းဖြစ်သော်လည်း proxy ကိုကြည့်လျှင်ကောင်းလိမ့်မည်.
အကူအညီ – ၄/၅ – အကောင့်မန်နေဂျာပါဝင်သည်.
မှတ်ချက် – ၃.၅/၅ – သင့်တင့်လျောက်ပတ်သော ၀ န်ဆောင်မှုဖြစ်သော်လည်းဤစျေးတွင်လုံခြုံရေးပိုလိုအပ်သည်.
Jeffery TikTok bot ကြီးတစ်ခု၏နာမည်ဖြစ်သည်.
ဤနောက်လိုက်များကိုစတင်ခေါ်ဆောင်ရန်အလိုအလျောက်လိုက်နာမှု / မလိုက်နာပါနှင့်.
သူတို့မှာအခကြေးငွေအစီအစဉ်နှစ်ခုရှိတယ် – လုပ်ငန်းတစ်ခုစတင်သည်, ၎င်းသည် နက္ခတ္တဗေဒဆိုင်ရာ ပေါင်းလဒ် ၃၄၉ ကို ယူဆောင်လာသည်။,တစ်လလျှင် ၉၉ ဒေါ်လာ.
စျေးနှုန်း – $$$ – $49.99 p/m
လက္ခဏာများ – ၄/၅ – ဦး တည်ချက်, smart စာရင်းဇယားများနှင့် parameters များကိုသုံးရန်အလွန်လွယ်ကူသည်.
လုံခြုံရေး – ၄/၅ – လုံခြုံသောပလက်ဖောင်းနှင့်ကိုယ်ပိုင် proxy တို့ပါ ၀ င်သည်.
အကူအညီ – ၄/၅ – 24 နာရီဖောက်သည်ထောက်ခံမှု, ၇ ရက် ၇ ရက်.
မှတ်ချက် – ၄/၅ – သေတ္တာအားလုံးကိုအမှတ်အသားပြုသောကြီးကျယ်သောအလိုအလျောက်, အနည်းငယ်ပိုစျေးကြီးသည်.
လက်ငင်း Le bot TikTok, Auto Tokker နှင့်ဆင်တူသည်, သင်အလိုအလျောက်နှစ်သက်မှုနှင့်နောက်လိုက်များရရှိရန်ခွင့်ပြုသည်, အားလုံးသည် username နှင့် hashtag ကိုအခြေခံသည်.
၎င်းသည်စျေးသက်သာသည်, သို့သော်လည်းသင်၏ TikTok ကိုတိုးတက်စေရန်ကောင်းမွန်သောပလက်ဖောင်းတစ်ခုပေးသည်.
၎င်းသည်စကေး၏စျေးသက်သာသောအဆုံးတွင်ရှိနေသော်လည်းသင်၏ TikTok ကြီးထွားစေရန်ကောင်းမွန်သောပလက်ဖောင်းတစ်ခုပေးစွမ်းသည်.
စျေးနှုန်း – $ – $15 p/m
လက္ခဏာများ – ၃.၅/၅ – စံအသုံးပြုသူအမည်နှင့် hashtag ပစ်မှတ်.
လုံခြုံရေး – ၃/၅ – လုံခြုံသောချိတ်ဆက်မှုရှိသော်လည်းကြားခံရွေးချယ်စရာမရှိပါ.
အကူအညီ – ၃.၅/၅ – အွန်လိုင်းအကူအညီ.
မှတ်ချက် – ၃.၅/၅ – ကောင်းမွန်သောအလိုအလျောက်ဝန်ဆောင်မှု, ဒါပေမယ့် proxy တစ်ခုလိုအပ်တယ်.
Tok တိုးတက်မှု ၎င်းသည်ကောင်းမွန်သောလုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းကိုပေးသောထိရောက်သော ၀ န်ဆောင်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်.
ဖော်မြူလာ ၂ ခု အဆိုပြုခြင်းပါ၀င်သည့် ပုံမှန်ချဉ်းကပ်နည်းကို သူလက်ခံခဲ့သည်။, Starter နှင့် Pro.
Pro သည်သင့်အားပိုမိုကောင်းမွန်သောဆက်တင်များပေးသည်, ဒါပေမယ့်ပိုမြင့်တဲ့စျေးနှုန်းမှာ.
လက္ခဏာများ – ၃.၅/၅ – Hashtag သည် Starter package ကိုသာပစ်မှတ်ထားသည်.
လုံခြုံရေး – ၃/၅ – လုံခြုံသောပလက်ဖောင်းဖြစ်သော်လည်း proxy ရွေးချယ်စရာမရှိပါ.
အကူအညီ – ၃/၅ – သီးသန့်ထောက်ပံ့မှုမရှိခြင်း.
မှတ်ချက် – ၃/၅ – မဆိုးပါဘူး, ဒါပေမယ့်စျေးနှုန်းအတွက်, ပိုကောင်းလိမ့်မည်.
Vire မကြာသေးမီက hype များစွာ၏အကြောင်းအရာဖြစ်ခဲ့သည်, ဒါပေမယ့်ဒါကတရားမျှတတယ်ဆိုတာငါတို့သေချာမသိဘူး.
စျေးနှုန်း – $$$ – $100 p/m
လက္ခဏာများ – ၃/၅ – Hashtag ပစ်မှတ်နှင့်အခြားအင်္ဂါရပ်အချို့.
လုံခြုံရေး – ၃/၅ – ပရောက်စီ၏လိုက်ဖက်မှုအထောက်အထားမရှိပါ.
အကူအညီ – ၄/၅ – အကောင့်မန်နေဂျာများနှင့်အွန်လိုင်းပံ့ပိုးမှု.
မှတ်ချက် – ၃/၅ – ကံမကောင်းစွာဖြင့်ဖောင်းပွမှုနှင့်မကိုက်ညီပါ.
မင်းရဲ့ Tik Tok အကောင့်ကို Ban ကနေဘယ်လိုကာကွယ်မလဲ ?
ဒီကန့်သတ်ချက်တွေကအမြဲရှိနေလိမ့်မယ်, ထို့ကြောင့်သင်၏ TikTok အကောင့်ကိုကာကွယ်ရန်သင်လုပ်နိုင်သောအကောင်းဆုံးအရာမှာaကိုသုံးခြင်းဖြစ်သည် proxy မိုဘိုင်း.
မိုဘိုင်း proxy ဆိုသည်မှာသင်၏ TikTok သို့ဆက်သွယ်မှုသည် mobile browser တစ်ခုနှင့်တူသည်, မင်းကန့်သတ်ချက်တွေကိုကျော်လွန်သွားရင်မင်းရဲ့ယုံကြည်ရမှတ်ကိုထိခိုက်မှာမဟုတ်ဘူးဆိုတာသေချာတယ်.
block တစ်ခုနှင့်ပိတ်ပင်ခြင်းခံရခြင်းသည်မတူညီသောအရာနှစ်ခုဖြစ်သည်ကိုသတိရရန်အရေးကြီးသည်။, အောက်မှာပြထားတဲ့အတိုင်း:
အများအားဖြင့် block တစ်ခုသည်သင့်အားအရေးယူဆောင်ရွက်ခြင်းမှအပိတ်ခံလိုက်ရသောအရာဖြစ်သည်
သင်၏အကောင့်ကို ၀ န်ဆောင်မှုမှခေတ္တ (သို့) အပြီးတိုင်ထုတ်ယူသောအခါတားမြစ်ချက်ကိုကြေငြာသည်
မင်းရဲ့ TikTok အကောင့်ကိုဘာကြောင့်အပိတ်ခံရတာလဲ ?
သင်၏ TikTok အကောင့်ကိုအကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့်ပိတ်ထားနိုင်သည်.
သင် TikTok အသိုင်းအဝိုင်းရဲ့လမ်းညွှန်ချက်တွေကိုလိုက်နာပြီးညစ်ညမ်းတဲ့အရာတွေကိုမတင်ပါနဲ့, မင်းမှာဘာပြဿနာမှရှိမှာမဟုတ်ဘူး.
“ဆိုက်ဘာအနိုင်ကျင့်ခြင်းအကြောင်းအရာတွင်ပါဝင်ခြင်း, လူမျိုးရေးကြောင့်လူတစ် ဦး တစ်ယောက် (သို့) လူတစ်စုအားမုန်းတီးရန်လှုံ့ဆော်မှု၊ အမုန်းစကားသို့မဟုတ်လှုံ့ဆော်မှု, သူတို့ရဲ့လူမျိုးရေး, သူတို့ရဲ့ဘာသာတရား, သူတို့ရဲ့အမျိုးသားရေး, သူတို့ရဲ့ယဉ်ကျေးမှု, သူတို့ရဲ့အခက်အခဲ, သူတို့ရဲ့လိင်စိတ်ခံယူမှု, သူတို့ရဲ့လိင်, သူတို့ရဲ့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလက္ခဏာ, သူတို့၏အသက် (သို့) အခြားခွဲခြားဆက်ဆံမှုမှန်သမျှသည်တားမြစ်ချက်ကို ဦး တည်စေနိုင်သည်” ရပ်ရွာလမ်းညွှန်ချက်များအတိုင်း.
ဟာလာဟင်းလင်းပို့စ်များ – ဒါကသိသာထင်ရှားတဲ့အကြောင်းပြချက်တစ်ခုဖြစ်ပြီးလူများစွာအတွက်ပြဿနာတွေဖြစ်စေတယ် အင်စတာဂရမ်. မည်သည့်ဆိုရှယ်မီဒီယာကုမ္ပဏီကမှသူတို့၏အ ၀ တ်ဗလာကိုအဖော်အချွတ်မလုပ်လိုပါ, အထူးသဖြင့်လူငယ်ပရိသတ်ကိုရည်ရွယ်သည်. ဗွီဒီယိုအားလုံးသန့်ရှင်းနေရန်ကောင်းသောအကြံပေးချက်ဖြစ်သည်.
သေနတ်များသို့မဟုတ်တရားမ ၀ င်မူးယစ်ဆေးဝါးများအကြောင်းမက်ဆေ့ခ်ျများတင်ပါ – သေနတ်များနှင့်မူးယစ်ဆေးဝါးများအကြောင်းတင်ခြင်းသည်ရပ်ရွာလမ်းညွှန်ချက်များနှင့်ဆန့်ကျင်ပြီးကာလရှည်ပိတ်ပင်မှုကိုခံရနိုင်သည်.
မူပိုင်ခွင့်ရှိသောအကြောင်းအရာများကိုထုတ်ဝေခြင်း – သင်၏ TikTok ဗီဒီယိုများတွင်မူပိုင်ခွင့်ရထားသောအကြောင်းအရာများကိုပြန်မသုံးရန်အကြံပြုသည်. အခြားနာမည်ကြီးသုံးစွဲသူများ၏ဗွီဒီယိုများကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းထုတ်လုပ်ခြင်းသည်ခိုးဝှက်ပိတ်ပင်ခြင်းကိုဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည်.
TikTok တစ်ခုပိတ်ပင်ခြင်းသည်မည်မျှကြာရှည်သနည်း ?
တားမြစ်ချက်၏ အများဆုံးကြာချိန်သည် ၁၄ ရက်ခန့်ဖြစ်သည်။.
ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ပါ, သင်အီးယူညွှန်ကြားချက်များကိုအမြဲမပြတ်ချိုးဖောက်လျှင်, အချိန်ကြာမြင့်စွာနှင့်အကန့်အသတ်မရှိပိတ်ပင်ခြင်းမှသင်အကျိုးခံစားနိုင်သည်.
မင်းရဲ့အကောင့်နာမည်ကြီးလာရင်မင်းစောင့်နိုင်တယ်. Tik Tok အကောင့်အသစ်တစ်ခုကိုလည်းသင်ဖန်တီးနိုင်သည်.
အချို့သုံးစွဲသူများက၎င်းတို့၏ IP address ကိုအပြည့်အ ၀ ပိတ်ထားသည်ဟုဆိုသည်, ၎င်းကိုဖြေရှင်းရန်တစ်ခုတည်းသောနည်းလမ်းမှာသင်၏ IP address ကိုပြောင်းရန်ဖြစ်သည်.
ယခင်ဆောင်းပါး၂၀၂၀ မှာအကောင်းဆုံး Instagram Bots တွေကဘာတွေလဲ၊ မင်းရဲ့အကောင့်ကိုဘယ်လိုကာကွယ်ထားလဲ?
နောက်ဆောင်းပါးReels Instagram : TikTok ကို Instagram ရဲ့တုံ့ပြန်မှု